Hitan'izy ireo ny infarction myocardial noho ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Hitan'izy ireo ny infarction myocardial noho ny Apple Watch anao
Efa misy mpampiasa maro izay manefa ny fiainantsika amin'ny fiainantsika Apple Watch. Tsy misy isalasalana, ireo sensor izay mampitandrina antsika amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitepon'ny fony, ny haavon'ny oxygen ary ny ECG dia manampy mihoatra ny iray mpampiasa manana olana ara-pahasalamana isan'andro.
Ary anio dia mahita tranga vaovao isika. Ramatoa iray avy any Michigan dia nanana fampitandremana avy amin'ny Apple Watch fa avo loatra ny tahan'ny fo. nanana Kapoka 169, miala sasatra. Nankany amin'ny efitrano fitsaboana maika izy ary voan'ny aretim-po kely tokoa. Andro vitsy taty aoriana dia nodidiana tamin'ny lalan-drà izy mba hamahana ny olana sy hisorohana ny aretim-po vaovao. Bravo.
Tamin'ny 22 aprily Diane feenstra, teratany iray any Norton Shores, Michigan, dia nahita fanamarihana tao amin'ny Apple Watch nilaza taminy fa nanana fo mitebiteby be izy tamin'izany fotoana izany. Nahazo fitepon'ny fony 169 kapoaka isa-minitra izy, na dia nanao fiakarana 12 aza ny fampihetseham-batana lehibe indrindra nataony tamin'io andro io.
Niahiahy izy ka niantso ny vadiny, izay nanondro azy tany amin'ny dokoterany. Fitsidihana ny hopitaly vonjy taitra Hopitaly no nanamarina fa voan'ny a fijanonan'ny fo tampoka kely fotsiny, ary vao tsikaritry ny fampitandremana tamin'ny famatrehany.
Nanome aspirinina azy ny ER ary nandefa azy tany amin'ny Meijer Heart mba hanao fanadinana aretim-po fanampiny. Taorian'ny valim-panadinana dia fantatra fa manana fanakanana ao amin'ny lalan-drà, izay namboarina tamin'ny fametrahana stent tamin'ilay sakana voalaza.
Tsy isalasalana fa ny Apple Watch no antony lehibe indrindra nangatahan'i Feenstra vonjy. Iray ihany no nananany tsy firaharahiahy kely, nefa tsy nieritreritra mihitsy hoe mety ho infarcie miokardia. Ka raha tsy nandeha tany amin'ny ER izy rehefa hitany fa nitombo ny fitempon'ny fony, dia tsy ho voamarina ara-potoana ny ratram-pony, ary azo inoana fa nanana aretim-po hafa izy, taty aoriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Hitan'izy ireo ny infarction myocardial noho ny Apple Watch anao
OS X Lion sy Mountain Lion dia azo sintonina maimaim-poana
Notsapainay ny Tado Smart AC Control V3 +. Mifehy ny AC medainte HomeKit anao